Abenzi be Polyester yelanga kunye nabathengisi
Isolar Screen Roller Shade 30 Polyester 70 PVC Ilanga elikwimfama eyimfama
Izinto eziluncedo zokumfamekisa kwe roller
(1) Ingxolo kunye nokunciphisa ingxolo
Uhlobo olutsha lwezivalo zeroller alusebenzi ngaphandle kwengxolo lodwa, ukuba usapho lubekwe ecaleni kwendlela enesiphithiphithi, kwisikhululo seenqwelomoya, njl.njl, ukufaka ii shutter roller kunokunciphisa kakhulu ukuphazamiseka kwengxolo yangaphandle kwaye abantu banokonwabela ubomi bokuthula kunye nemeko yokufunda .
Ukuveliswa kwelanga kwilaphu elivela eChina Blinds Factory Sheer Elegance Sunscreen Blind
Njengoko isitsho le nto, abantu bahlala bonwabile xa bonwabile. Emva kwayo yonke loo nto, basebenze nzima ixesha elide, kwaye ekugqibeleni banendlwane yabo, ke bahlala befuna ukwenza umsebenzi olungileyo wokuhombisa. Kodwa ungaluqhuba njani uhombiso lwezindlu ezintsha? Kubantu abatsha abangenamava, ukuba abazi kakhulu, baya kuthi baphulukane nelahleko. Namhlanje, siza kuthetha ngendlela yokukhetha amakhethini okuhombisa izindlu ezintsha.
Australia Polyester Kwaye IVinyl PVC ipholiyesta Ilanga elangeni Ilaphu Kuba mqengqeleki Blind
Zeziphi iimfama ezinokuhlangabezana neemfuno zabantu abaninzi?
Ukulawula ukukhanya yeyona nto iphambili esebenzayo kubasebenzisi abaninzi ukuba bakhethe iimveliso zokhuselo lwelanga. Hluza okanye thintela ukukhanya kwelanga ngokweemfuno zeendawo ezahlukeneyo.
Iimveliso ze-shade ezifakwe kakuhle zinganciphisa ukusetyenziswa kwamandla ngenxa yokuba abasebenzisi abaxhomekeke kwimoya yomoya okanye ukufudumeza ukulawula ukushisa kwegumbi. Ebusika, iindleko zokufudumeza zinokugcinwa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-49. Ehlotyeni, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-60 zeendleko zefriji ezinokugcinwa.
I-China Roller Shades egqityiweyo yeVenetian Vision Combi Blinds Component Part Curtains
Ulwazi loLuhlu lweLanga eliMnyama eliMfama eliMnyama
Ukuhonjiswa kosapho, kukho ulwazi olunjalo ngombala: ukuba umbala wokuhonjiswa kwigumbi lokulala ushushu, uya kulungela ukuphucula ukuhambelana kwemvakalelo yendoda nomfazi; ukuba isifundo sihonjiswe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, siyakwenza ukuba abantu bakwazi ukugxila ekufundeni nakuphando; Kwivenkile yokutyela, itafile yokutya ebomvu nebomvu ilungele ukuphucula ukutya. Ke, ukuhambelana kombala kubaluleke kakhulu. Kukho imibuzo emininzi yesikolo saseprayimari kuyo!
I-China Waterproof Curtain Sunscreen Shade amalaphu eeRoller Blinds zeeNxalenye zeWindows
Ingubo ye Window Blinds
Kwinkqubo yophuhliso lobomi bezinto zabantu kunye nobomi bokomoya, amalaphu imibala yeemfama ezijikelezayo zihlala zikhanya ngomtsalane wobugqi. Abantu abafumani nje kuphela, bayabukela, bayile, kwaye bayalithanda ilizwe elinemibala, kodwa bayaqhubeka nokukhulisa ukuqonda kunye nokusetyenziswa kweefestile zemibala yeefestile ngotshintsho lwamaxesha.
Amalaphu e-roller angaboniyo ayisebenzisa kakuhle imibala. Amakhethini e-roller angenawo amanzi anemibala eqinileyo, i-hemp, i-gradient, i-jacquard, kunye neminye imibala ecebisa amalaphu e-China.
Iwindow Blinds Screen Ilanga elangeni Ilaphu leSeli yeSola yelanga leRoller Blind
Isivalo seWindows Window
Indalo ilifanele igama lomyili wayo. Ngemibala emithathu eprayimari elula, idale amawaka emibala, enjengombala omthubi noluhlaza entwasahlobo, enemibala ehlotyeni, imephu ebomvu ekwindla nesilivere ebusika. Umbala ngamnye unomtsalane okhethekileyo. Xa zidityanisiwe kunye, iziphumo ezibonakalayo ziya kuphindwa kabini ngesiqingatha somzamo. Ngaba ubenolwazi oluphangaleleyo njani ngezakhono zokudibanisa umbala weentlobo ezahlukeneyo zeendlela zokunxiba ezithambileyo? Namhlanje, iGroupeve izakuthetha ngayo!
Igumbi lokuGaya lokuGcina igumbi eliyi-25mm IVinyl yaseVenetian yaseKorea yeShutter Window Roller Blind
Ezona ntlobo ziphambili zeemfama kule mihla
Amalengalenga axhonyiweyo ukukhusela ilanga kunye nokugquma kobushushu yindlela eqhelekileyo esetyenziswa ngokwesiqhelo. Zininzi iintlobo zamakhethini, kwaye nganye inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga malunga nobungqina belanga kunye nobushushu obushushu. Kungcono ukhethe amakhethini amnyama, amnyama anombala welanga kunye nezixhobo.
Ikhethini yengubo. Umbala uyajiya kwaye umnyama, kokukhona kungcono ukufakela ubushushu kunye nefuthe lokugquma ubushushu, ngelixa umqhaphu omsulwa kunye nezinto ze-hemp ziphefumla ngakumbi. Unokukhetha izinto ezinokhuselo lwe-UV. Ukuba awufuni ukutshintsha ikhethini yoqobo, ungongeza umaleko welaphu lokufiphaza phakathi kwekhethini yelaphu kunye nekhethini ye-gauze.
I-Sheer Elegance Sun Shade i-Sunscreen Mesh Curtain Blinds PVC amalaphu
Ilaphu elikhuselwe lilanga
Ilaphu elikwi-sunscreen lilaphu elisebenzayo elincedayo lokuthintela ilanga ukuthintela ukukhanya kwelanga kunye nelanga. Ihlala isetyenziselwa ukugubungela izinto ukunqanda ukunxibelelana nokukhanya okuqinileyo kwaye inefuthe lokuthintela ukukhanya okuqinileyo kunye nemitha ye-ultraviolet kunye neminye imiba.
Ngokusisiseko, umgangatho oqhelekileyo womnatha wesikrini umnyama ufikelela kuma-85% -99%, ukuvuleka kuyahluka ukusuka kwi-1% -15%, umsebenzi odangazelayo wedangatye ofumanekayo onesiphumo esivuthayo sedangatye.
Isifundo sokucoca ukuKhanya kwelanga kweNtengiso yoLusu oluRholayo oluyimfama kwiiWindow Shades
Khetha amakhethini e-roller yokufunda
1. Umbala kufuneka utshatise nezinto zangaphakathi.
Xa ukhetha iimfama, kungcono ukuba unike ingqalelo umbala wenye ifanitshala ekufundweni, ngakumbi umbala wekhasethi yencwadi. Ifenitshala yale mihla ibaluleke ngakumbi kunxibelelaniso ngokubanzi. Xa ukhetha umbala weemfama, ukuba sijonga umbala wefanitshala. Tshatisa umbala wefanitshala, isifundo sinokwakhiwa ngcono.
Ukuveliswa kwelanga kwilaphu elivela eChina Blinds Factory Sheer Elegance Sunscreen Blinds
Blinds umdlalo wombala wekhusi
Kwisihombiso sasekhaya, sihlala sijonga umbala ukwenza uhombiso lwasekhaya. Emva kwayo yonke loo nto, akukho mpazamo inkulu kumbala, kodwa ininzi kakhulu, kwaye ayinakuphepheka ukuba iyadika! Kwaye umhombiso wekhaya awunakwenza kuphela ukuba umbala ube likhaya, kodwa uzise imo eyahlukileyo kubantu abanemibala eyahlukeneyo. Ke indlela yokuhombisa ikhaya elinemibala? Nceda ulandele iGroupeve ukuze ujonge!
Yangaphandle Manual Window Shutter Isiqingatha Shape Layer Dual Electric kabini mqengqeleki Blinds
Ukusetyenziswa kwelaphu leqwarasi lescreen yelanga
1. Izakhiwo zikarhulumente
Amalaphu ngokubanzi kufuneka ahlangane nenqanaba le-B1 (isalathiso seoksijini -32) umlilo kunye nemilinganiselo yedangatye elidangayo
2. Isakhiwo seofisi (iofisi, igumbi leentlanganiso, indawo yokwamkela iindwendwe)
Ukujongana nempuma nentshona ngokubanzi khetha amalaphu nge-1% -3% yokuvuleka; ejonge emantla ngokubanzi ukhetha amalaphu ane-10% yokuvuleka; Ukujonga emazantsi ngokubanzi ukhetha amalaphu nge5% yokuvuleka.
I-China Home Decor Umthunzi weLanga weLanga oSasaza oLuhlaza oMfama oLukhuni e-China
Ilaphu leRoller Blind
Ngokuphuculwa kwemigangatho yokuphila, abantu baneemfuno eziphezulu neziphezulu zamalaphu efestile yomthunzi welanga. Abathengi abasanikeli ingqalelo kuphela kumgangatho wokubonakala kwe-China i-sunscreen roller amalaphu angabonakaliyo e-China, kodwa banikela ingqalelo ngakumbi kukhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo kwendwangu yokuhombisa ekhaya. Ke ngoko, iipropathi zemisebenzi eyahlukeneyo yelaphu lomthunzi ziya zisiba ngakumbi nangakumbi.
Ukufudumeza ubushushu kunye nokonga umbane
Amalaphu okwehla aneempawu ezifanelekileyo zokugquma ubushushu ezingenawo amanye amalaphu, ezinokuthi zibambe ngokufanelekileyo ubushushu obuveliswa yimitha yelanga, kunciphise kakhulu izinga lokusetyenziswa kwezinto zokungenisa umoya ngaphakathi, ezinokuphelisa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-86 zemitha yelanga kunye nokugcina umoya wangaphakathi ugudile. kwaye ungonwabela umbono omhle ngaphandle kwefestile kamnandi.